Sandar Win – Page2– AYA Bank
Author: Sandar Win
ကိုယ်ပိုင်အသေးစားနှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် AYA Bank ၏ SME Shop Owner Loan ချေးငွေအကြောင်း
Posted on August 4, 2019 September 2, 2019 by Sandar Win
၂၀၁၉ ခုနစ်၊ သြဂုတ်လ (၄) ရက်နေ့တွင် Melia Hotel (Ballroom) ၌ ကျင်းပခဲ့သော MRA Connect4Event ကို မြန်မာနိုင်ငံစားသောက်ဆိုင် လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၊ ဧရာဝတီဘဏ်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံရှိ နယ်မြေဒေသအသီးသီးမှ စားသောက်ကုန်နှင့် စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နေသူများ၊ လုပ်ကိုင်လိုသူများနှင့် စိတ်ဝင်စားသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အတွေ့အကြုံရှိ လုပ်ငန်းရှင်များရဲ့ အထူးဆွေးနွေးစကားဝိုင်းနှင့်အတူ ကိုယ်ပိုင်အသေးစားနှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် AYA Bank ၏ SME Shop Owner Loan ချေးငွေအကြောင်းကိုလည်း ရှင်းလင်းပြောကြားသွားခဲ့ရာ တက်ရောက်သူများ၏ စိတ်ပါဝင်စားမှုကို အထူးရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်မှ ဓမ္မဒူတဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင်ဆေကိန္ဒ အမှူးပြုသော သံဃာတော်များအား ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းနှင့် ပရိတ်တရားတော်များ နာယူကြည်ညိုခြင်း
Posted on August 1, 2019 September 2, 2019 by Sandar Win
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၁ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း(၁)ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ(၁)ရက် (ကြာသပတေးနေ့) နံနက်ပိုင်းတွင် ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက် ဝန်ထမ်းမိသားစုများ၏ ဝါဆိုသင်္ကန်းနှင့် လှူဖွယ်ဝတ္ထုအစုစု ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း အခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့သည်။ ရှေးဦးစွာ ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်(ရုံးချုပ်) (ROWE)၊ ပုသိမ်ခန်းမ၌ ဓမ္မဒူတဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင်ဆေကိန္ဒ အမှူးပြုသော သံဃာတော်များအား အာရုဏ်ဆွမ်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ပြီးနောက် ဝါဆိုသင်္ကန်းနှင့် ဆွမ်းပဒေသာပင်ဝတ္ထုငွေကျပ် သိန်း(၁၀ဝ)တို့ကို ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်နှင့် ဇနီး ဒေါ်ဋ္ဌေးဋ္ဌေးခိုင်၊ အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီဝင်များ၊ ဌာနအကြီးအကဲများ၊ ဝန်ထမ်းမိသားစုများမှ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းကာ ပရိတ်တရားတော်များ နာယူခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ဓမ္မဒူတ ဆရာတော်မှ ကုသိုလ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသော တရားတော်အား ချီးမြှင့်ဟောကြားခဲ့ပြီးနောက် ဧရာဝတီဘဏ် ဝန်ထမ်း မိသားစုများမှ ကုသိုလ်ကောင်းမှု အစုစုတို့အတွက် ရေစက်သွန်းချ အမျှဝေခဲ့ကြသည်။ ဆက်လက်၍[…]
ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်၏ တာဝန်သိ ရိုးသားသူ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းအား ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခြင်း
ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်(ရုံးချုပ်) (ROWE) ၌ တည်ရှိသည့် ရန်ကုန် -၂၆ (ကျောက်တံတား) ဘဏ်ခွဲတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း ဦးနိုင်လင်းဦးသည် ၃၀-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့ နေ့လည်တွင် ဧရာဝတီဘဏ်သို့ လာရောက်ခဲ့သည့် Customer တစ်ဦး မေ့ကျန်ရစ်ခဲ့သော စာရွက်စာတမ်းနှင့် အဖိုးတန် လက်ဝတ်ရတနာပစ္စည်းများကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံထံ ရိုးသားစွာ အပ်နှံခဲ့ပါသည်။ ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံမှ CCTV မှတ်တမ်းမှတစ်ဆင့် ပြန်လည်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးပြီးနောက် ပစ္စည်းပိုင်ရှင် Customer အား ဆက်သွယ်၍ ၃၁-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့ ညနေတွင် ပိုင်ရှင်ထံသို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ တာဝန်သိ ရိုးသားသူ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း ဦးနိုင်လင်းဦးအား ဧရာဝတီဘဏ် Board of Directors အဖွဲ့နှင့် အကြီးတန်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့မှ ချီးမြှင့်သည့် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာနှင့်အတူ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ငွေ ကျပ်[…]
AYA Bank မှ Diamond sponsor အဖြစ်ပံ့ပိုးကူညီထားသော မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MRYEA)၏ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်
AYA Bank မှ Diamond sponsor အဖြစ်ပံ့ပိုးကူညီထားသော မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MRYEA)၏ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၂၄) ရက်နေ့ မှ (၂၅)ရက်နေ့အထိ နှစ်ရက်တိုင်တိုင် အမျိုးသားကဇာတ်ရုံ (မန္တလေး)တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စကားဝိုင်းနှင့် ဟောပြောပွဲများကို ဝါရင့်အတွေ့ကြုံရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အောင်မြင်သော စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်များက ဗဟုသုတရစရာ ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာများဖြင့် ပါဝင်ဆွေးနွေး ဟောပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ AYA Bank မှလည်း ကိုယ်ပိုင်အသေးစားနှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် SME Shop Owner Loan ချေးငွေအကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားသွားခဲ့ပြီး AYA Bank ၏ Point[…]
Safety Campaign အစီအစဉ်အဖြစ် အမြန်လမ်းများတွင် မော်တော်ယာဉ်ကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ အရှိန်အတိုင်းမောင်းနှင်ဖို့ နှင့် ကားမောင်းတဲ့အခါ ထိုင်ခုံခါးပတ်ပတ်ဖို့ စတဲ့ ယာဉ်စည်းကမ်း/လမ်းစည်းကမ်းများကို မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်သူ နှင့် လိုက်ပါစီးနင်းသူများအား အသိပညာပေးပြောကြားခြင်း
Posted on July 7, 2019 July 8, 2019 by Sandar Win
Safety Campaign အစီအစဉ်အဖြစ် အမြန်လမ်းများတွင် မော်တော်ယာဉ်ကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ အရှိန်အတိုင်းမောင်းနှင်ဖို့ နှင့် ကားမောင်းတဲ့အခါ ထိုင်ခုံခါးပတ်ပတ်ဖို့ စတဲ့ ယာဉ်စည်းကမ်း/လမ်းစည်းကမ်းများကို မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်သူ နှင့် လိုက်ပါစီးနင်းသူများအား အသိပညာပေးပြောကြားခြင်း အစီအစဉ်အဖြစ် AYA Bank၊ AMI၊ AYAtrust၊ Max Myanmar နှင့် Max Highway တို့မှ အတူပူးပေါင်း၍ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၇) ရက်နေ့တွင် ထောက်ကြန့်တိုးဂိတ်၌ နံနက် (၇)နာရီခွဲ မှ (၉)နာရီအထိ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းအစီအစဉ်တွင် ယာဉ်အန္တရာယ် ကင်းဝေးစေရန်အတွက် သတိပေးနှိုးဆော်ချက်အနေဖြင့် တိုးဂိတ်များသို့ ဖြတ်သန်းသွားလာလျက်ရှိသော မော်တော်ယာဉ်များအား ရောင်ပြန်စတစ်ကာများ ကပ်ပေးခြင်း၊ လိုက်ပါလာသူများအား ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းဝေးစေရေး အသိပေးခြင်းနှင့် သော့ချိတ်များ လက်ဆောင်ပေးဝေခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အလားတူ ၂၀၁၉၊[…]
Posted on July 6, 2019 July 8, 2019 by Sandar Win
မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အသက်တစ်ချောင်းဟာ မိတ်ဆွေတို့အတွက် အရေးကြီးသလို မှီခိုအားကိုးနေတဲ့ မိသားစုအတွက်လည်း တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာ မမေ့နဲ့နော်။ အခုလို မိုးရာသီအချိန်မှာ ကားမောင်းတဲ့အခါ အရမ်းကို အန္တရာယ်များတဲ့အတွက်ကြောင့် ကားကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ အရှိန်အတိုင်းမောင်းနှင်ဖို့နှင့် ကားမောင်းတဲ့အခါ ခါးပတ်ပတ်ဖို့ စတဲ့ ယာဉ်စည်းကမ်း/လမ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း လိုက်နာ မောင်းနှင်မယ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေ အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ သွားလာနိုင်မှာဖြစ်သလို မိတ်ဆွေရဲ့ အိမ်အပြန်ခရီးလမ်းတိုင်းဟာလည်း လုံခြုံမှုရှိနေမှာပါ။ ဧရာဝတီဘဏ်မှလည်း Reduce Speed Limit Campaign ကို AMI, AYAtrust, Max Myanmar, Max Highway တို့နှင့် အတူပူးပေါင်း၍ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၆) ရက်နေ့တွင် မှော်ဘီ တိုးဂိတ်၌ နံနက် (၇)နာရီခွဲ မှ (၉)နာရီအထိ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းအစီအစဉ်တွင် ယာဉ်အန္တရာယ် ကင်းဝေးစေရန်အတွက်[…]
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တနန္ဒမာလာဘိဝံသ အမှူးပြုသော သံဃာတော်များအား ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း နှင့် ပရိတ်တရားတော်များ နာယူကြည်ညိုခြင်း
Posted on July 1, 2019 July 1, 2019 by Sandar Win
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင်လ ၁ရက်၊ ၂၀၁၉ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၁ခုနှစ်၊ နယုန်လကွယ်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁) ရက် (တနင်္လာနေ့) တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ နိုဗိုတယ်ရန်ကုန်မက်စ်ဟိုတယ် ရန်ကုန်ခန်းမ၌ Max Myanmar Group နှင့် AYA Financial Group မိသားစုများ၏ ဝါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း နှင့် ပရိတ်တရားနာယူခြင်းတို့ကို ဆင်ယင် ကျင်းပခဲ့သည်။ အခမ်းအနားတွင် ရွှေကျင်နိကာယ ဥပဥက္ကဋ္ဌ၊ သီတဂူ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်၊ အဘိဓမ္မ တက္ကသိုလ်တို့၏ ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တနန္ဒမာလာဘိဝံသ အမှူးပြုသော သံဃာတော်များအား နံနက်ပိုင်းတွင် အာရုဏ်ဆွမ်း ဆက်ကပ်ပြီး ပရိတ်တရားတော်များ နာယူကြည်ညိုခဲ့သည်။ ဦးစွာပထမ အခမ်းအနားကို နမောတဿ (၃)ကြိမ်[…]
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တနန္ဒမာလာဘိဝံသထံမှ တရားတော်များ နာယူကြည်ညိုခြင်း
Posted on July 1, 2019 July 3, 2019 by Sandar Win
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁) ရက် (တနင်္လာနေ့) ညနေတွင် Max Myanmar Group နှင့် AYA Financial Group မိသားစုများမှ မိတ်ဖက် စီးပွားဖက်များအား စီစဉ်ဖိတ်ကြားသော တရားနာယူပွဲကို ရန်ကုန်မြို့၊ နိုဗိုတယ်ရန်ကုန်မက်စ်ဟိုတယ်၌ ကျင်းပရာ ရွှေကျင်နိကာယ ဥပဥက္ကဋ္ဌ၊ သီတဂူ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓ သာသနာပြုတက္ကသိုလ်၊ အဘိဓမ္မ တက္ကသိုလ်တို့၏ ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တနန္ဒမာလာဘိဝံသမှ တရားတော်များဟောကြားခဲ့သည်။ ဦးစွာပထမ အခမ်းအနားကို နမောတဿ (၃)ကြိမ် ရွတ်ဆို၍ ဖွင့်လှစ်ပြီး ကြွရောက်လာကြသော တရားနာ ဧည့်ပရိသတ်များက သြကာသ ကန်တော့ချိုးဖြင့် သံပြိုင်ညီညာ ကန်တော့၍ ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော်ထံမှ သီလပေး တရားခံယူခဲ့ကြပါသည်။ ယင်းနောက် ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်အား တရားနာပရိဿတ်များမှ သင်္ကန်း[…]
ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်၏ အခြေခံဘဏ်လုပ်ငန်း သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၀၁) ဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ (ဝ၂း၃၀) နာရီ အချိန်တွင် ဧရာဝတီဘဏ်ရုံးချုပ် (Rowe Conference Room)၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအခမ်းအနားသို့ ဖိတ်ကြားထားသော ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ၊ သင်တန်းဆရာ/ ဆရာမများ နှင့် သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူ များ တက်ရောက်ခဲ့ ပြီး ဧရာဝတီဘဏ်၊ ဒုတိယဥက္ကဌ ဒေါ်ခင်စောဦးမှ သင်တန်းဆင်းပွဲအမှတ်တရ အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်ဖိတ်ကြားထားသော ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများမှ သင်တန်းသား/သင်တန်းသူများအား သင်တန်းဆင်း အောင်လက်မှတ်များ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ သင်တန်း အပါတ်စဉ် (၁၀၁) တွင် ထူးချွန်စွာအောင်မြင်သူများအား အသိအမှတ်ပြု ဆုတံဆိပ်များ နှင့် အမှတ်တရ လက်ဆောင်များ ပေးအပ်ခဲ့ရာ[…]
EDGE Certificate for Gender Equality
Posted on June 13, 2019 June 14, 2019 by Sandar Win
EDGE Certificate for Gender Equality Ayeyarwady Bank is now the first bank in Myanmar that awarded EDGE Certificate for Gender Equality in working environment. The object of attempting to achieve this global recognized certificate is to becomeabetter workplace which is supporting every gender the same in single sectors of office atmosphere. We are[…]
Asia Money 2019 Best Bank for SMEs & Asia Money 2019 Best Bank for CSR
Asia Money 2019 Best Bank for SMEs : ဖွံ့ဖြိုးဆဲ စီးပွားရေးဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် စီးပွားရေး အားလုံးအနက် ၉၀ မှ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (SMEs) ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ SME လုပ်ငန်းများအား ကူညီထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့် ဧရာဝတီဘဏ် ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဦးဇော်ဇော် အား ပြည်သူအများက အထူးပင် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုလျက်ရှိကြသည်။ AYA Bank အနေဖြင့် ဖွံဖြိုးရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာရေး အထောက်အကူပြု အဖွဲ့အစည်းများ၊ အေဂျင်စီများနှင့် ဘက်စုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖြိုးစစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဂျာမနီနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ကော်ပိုရေးရှင်း (DEG-KfW)၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဖွံ့ဖြိုးမှု Credit Agency၊ ဂျပန်နိုင်ငံ[…]
EDGE Certificate ချီးမြှင့်ခြင်း အခမ်းအနား
Posted on May 16, 2019 June 14, 2019 by Sandar Win
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ကျား၊မ တန်းတူညီမျှမှုဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် EDGE Certificate ချီးမြှင့်ခြင်း အခမ်းအနားကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ကျား၊မ တန်းတူညီမျှရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အသင်း (BCGE) မှ စီစဉ်ကျင်းပခဲ့ပြီး ဧရာဝတီဘဏ်မှ အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ ဦးမြင့်ဇော်၊ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဒေါ်ခင်မမ အပါအဝင် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ ဦးမြင့်ဇော် မှ “လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ကျား၊မ တန်းတူညီမျှရေး CEO Challenge” Panel Discussion တွင် Panelist တစ်ဦးအနေဖြင့် ပါဝင်ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ဧရာဝတီဘဏ်သည် ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြု ကျား၊မ တန်းတူညီမျှမှုဆိုင်ရာ EDGE Certificate ကို လက်ခံရရှိပြီးဖြစ်သည်နှင့်အညီ ကျား၊မ တန်းတူ အခွင့်အရေးများရရှိသည့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော[…]